ငယ်ရွယ်သောလူကြီးများတွင်ပြsexualနာရှိသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူ - လက်တွေ့၊
စိတ်ရောဂါကုသမှု Res။ စာရေးသူလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်; PMC 2017 ဖေဖော်ဝါရီ 28 အတွက်ရရှိနိုင်ပါ။
စိတ်ရောဂါကုသမှု Res ။ 2016 ဒီဇင်ဘာ 30; 246: 230-235 ။
2016 စက်တင်ဘာ 26 အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.1016 / j.psychres.2016.09.044
EW Leppink,(1) SR Chamberlain,(2) SA လာခြင်း,(1) နှင့် je Grant က(1)*
ငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက်သူတစ်ဦးကမှတ်သားလောက်အရေအတွက်ကချွတ်ယွင်းခြင်းနှင့်ဒုက္ခဆင်းရဲအတွက်ရရှိလာတဲ့, ထကြွလွယ်သောအပြုအမူကိုထိန်းချုပ်ပေးဖို့ရုန်းကန်။ ပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (PSB) ၏အကဲဖြတ်သည်အခြားလူဦးရေမှဆွေမျိုးလက်တွေ့ကွဲပြားခြားနားမှုမှတ်ချက်ချကြပါပြီ, ဒါပေမယ့် neurocognitive တွေ့ရှိချက်ကွဲပြားကြသည်။ ဤသည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသင်တန်းသားများကိုထင်ရှား PSB ရောဂါလက္ခဏာတွေမှ PSB ဆွေမျိုးနှင့်အတူလက်တွေ့တင်ဆက်မှုနှင့်လူနာ neurocognitive ပရိုဖိုင်းကိုအကဲဖြတ်ထားပါသည်။
492 ပါဝင်သူ (18-29) ငယ်ရွယ်လူကြီးများအတွက် Impulse အပေါ်လေ့လာမှုတစ်ခုအဘို့စုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ သင်တန်းသားများကိုအဖြေရှာတဲ့, Self-အစီရင်ခံစာပြီးစီးခဲ့နှင့်အတော်ကြာသိမြင် domains များအကဲဖြတ်ထားတဲ့ neurocognitive အစီအမံ။ PSB, စိတ်ကူးယဉ်လက်မှတ်ရေးထိုးအဖြစ်တိုကျတှနျးထားသတ်မှတ်, သို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်မှုထဲကခံစားခဲ့ရသို့မဟုတ်ဒုက္ခဆင်းရဲဖြစ်ပေါ်စေခဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူခဲ့သည်။
54 (11%) ပါဝင်သူများကလက်ရှိ PSB သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဤသည်အုပ်စုအဟောင်းတွေခဲ့အစောပိုင်းကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများနှင့်အရက်သေစာအသုံးပြုမှုကိုအစီရင်ခံတင်ပြခြင်း, နိမ့်ကျတာ၏အရည်အသွေးနှင့် Self-လေးစားမှု။ Comorbidity အထူးသဖြင့်စိတ်ကျရောဂါနှင့်အရက်မှီခိုဘို့, PSB အုပ်စု သာ. ကြီးမြတ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ PSB အုပ်စုတစ်စုကိုလည်း Impulse, ဆုံးဖြတ်ချက်ချ, Spatial အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်, ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ dysregulation အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုပြသခဲ့သည်။
ရလဒ်များ PSB စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု, သာ. ကြီးမြတ် comorbidity နှင့် neurocognitive ကွဲပြားခြားနားမှုတွေနဲ့ဆက်စပ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဤရွေ့ကားအသင်းအဖွဲ့များပုံမှန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူထက်ပိုပြီးအဓိကသက်ရောက်မှုအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ထို့အပွငျ, ဒီလေ့လာမှုဟာအရင်ကထက်ပိုရောထွေးထောက်ခံမှုတွေ့ပြီသော PSB အုပ်စုအများအပြား neurocognitive လိုငွေပြမှုသရုပ်ပြခဲ့သည်။
keywords: comorbidity, neurocognition, သိမှတ်ခံစားမှု
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေနှင့်လက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်များအပါအဝင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ, (ငယ်ရွယ်လူကြီးများအကြားဘုံများမှာKaestle et al ။ , 2004; Kann et al ။ , 2014; Santelli et al ။ , 1998) ။ တချို့ကတစ်ဦးချင်းစီသို့သော်မိမိတို့၏သွေးသားဆန္ဒရမ္မက်နှင့် / သို့မဟုတ်အပြုအမူကိုထိန်းချုပ်ပြဿနာများရှိသည်။ Young ကလူကြီးလည်းမကြာခဏအရက်အလွဲသုံးစားမှုနှင့်တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအပါအဝင်ယေဘုယျအားဖြင့်မြောက်မြားစွာထကြွလွယ်သောအပြုအမူ, (နှင့်ဆက်စပ်နေသည်ချန် et al ။ , 2005; Courney နှင့် Polich, 2009; Kann et al ။ , 2014; လူငယ်တို့ et al ။ , 2002) ။ အချို့ကိစ္စများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အခြားအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအပြုအမူတွေကိုသိသိသာသာချို့ယွင်းခြင်းနှင့်ဒုက္ခဆင်းရဲအတွက်ရရှိလာတဲ့ Impulse တစ်ပုံစံရောင်ပြန်ဟပ်မှစတင်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူငယ်ရွယ်လူကြီးများအကြားတွင်မျှမျှတတဘုံဖြစ်နိုင်ပေမဲ့, ကငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက်လိင်နှင့်အတူပြဿနာများတွေ့ကြုံခံစားမည်မျှရှင်းလင်းသည်။ ပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတော်လေးအထူးသဖြင့်လူငယ်လူကြီးများအတွက်သက်တမ်းတစ်လျှောက် understudied ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုတှငျကြှနျုပျတို့ Non-ကုသမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနှင့် ပတ်သက်. ငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက်ရှာကြံ၏ကြီးမားသောနမူနာအကဲဖြတ်။ ယခင်သုတေသန compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အခြားစွဲလမ်းအပြုအမူတွေနဲ့ဆက်နွယ်နေစေခြင်းငှါအကြံပြုသော်လည်း, အဘယ်သူမျှမလေ့လာမှုအပြုအမူတွေနဲ့သိမြင်တဲ့အကွာအဝေးမှပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဆက်ဆံရေးကိုစနစ်တကျလေ့လာထားပါတယ် (Black က et al ။ , 1997; Derbyshire နှင့် Grant က, 2015; Kuzma နှင့်အမဲရောင်, 2008) ။ ဤလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ကျနော်တို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနေနဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့သို့မဟုတ်ပြဿနာအဆင့်ရောင်ပြန်အပြုအမူတွေ (တိုကျတှနျးထားသထပ်တလဲလဲဖော်ပြသော, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာ, ဒါမှမဟုတ်ထိန်းချုပ်မှုထဲကဖြစ်သို့မဟုတ်သိသာထင်ရှားသောဒုက္ခဆင်းရဲစေရိပ်မိကြောင်းအပြုအမူ) ဆနျးစစျရှေးခယျြခဲ့ Over-pathologizing တစ်စိတ်ရောဂါရောဂါ (hypersexuality သို့မဟုတ် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်အမှုဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကဲ့သို့) အဖြစ်အပြုအမူမပါဘဲ။ အလားတူချဉ်းကပ်မှု (လက်တွေ့တင်ဆက်မှုပေါ်ဤအကြောင်းအပြုအမူတွေများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအကဲဖြတ်နိုင်ရန်အတွက်ထိုကဲ့သို့သောအန္တရာယ်ရှိသောသောက်သုံးရေနှင့်အဆင့်မြင့်အန္တရာယ်လောင်းကစားဝိုင်းကဲ့သို့သောအခြားပြဿနာအပြုအမူတွေနဲ့အတူအသုံးပြုလည်ပတ်ခဲ့ပြီးAgrawal et al ။ , 2010; Carneiro et al ။ , 2014). ကျနော်တို့ PSB မကြာခဏအစီရင်ခံမည်ဖြစ်ကြောင်းတွေးဆ, ထကြွလွယ်သောအပြုအမူတစ်ခုအကွာအဝေးနဲ့ဆက်စပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် PSB မရှိသမိုင်းနှင့်အတူငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက်မှနောက်ခံသိမြင်မှုကမောက်ကမဖြစ်မှုဆွေမျိုးနဲ့ဆက်စပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း. တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါအတှကျအအဖြေရှာတဲ့စံမရောက်ရှိပါဘူးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတစ်ခုပြဿနာအဆင့်ကို, ဆန်းစစ်ပါ, အထူးသဖြင့်အစောပိုင်းကြားဝင်နှင့်ပညာရေးအဘို့, အရေးကြီးသောပြည်သူ့ကျန်းမာရေးသက်ရောက်မှုရှိစေခြင်းငှါ။
အထူးသဖြင့်ရပ်ရွာလူထုနမူနာများတွင်လူငယ်များအကြားပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်မပြည့်စုံဒေတာ, ပေးထား, ဒီလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှခဲ့ကြသည်: 1) ငယ်ရွယ်လူကြီးများအတွက်ပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့် sociodemographic ဆက်စပ်မှုဆန်းစစ်; 2) စိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူသတင်းပို့သူကိုနုပျိုလူကြီးများအတွက်ဆက်နွယ်နေပါသည်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်; နှင့် 3) ဒီပြဿနာရဲ့ညွှန်ပြလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေး / အပြုအမူနှင့်အတူငယ်ရွယ်လူကြီးများအတွက် neurocognitive ကျောထောက်နောက်ခံပြုဆန်းစစ်။
491 ပါဝင်သူတစ်နမူနာငယ်ရွယ်လူကြီးများအတွက်ထကြွလွယ်သောအပြုအမူအပေါ်တစ်ဦးလေ့လာမှုနှစ်ခုကြီးမားသောအနောက်အလယ်ပိုင်းဒေသတစ်ခွင်တက္ကသိုလ်များအနီးပတျဝနျးကငျြအသိုငျးအဝိုငျးကနေစုဆောင်းခဲ့သည်။ PSB အဆိုပါမင်နီဆိုတာ Impulse Disorders အင်တာဗျူး (MIDI) သုံးပြီးအကဲဖြတ်ခဲ့သည် (Odlaug နှင့် Grant က, 2010) နှင့်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ module တစ်ခုကနေ4မူလတန်းအဖြေရှာတဲ့မေးခွန်းများကို, မဆိုဖို့ "Yes" ကိုတစ်ဦးတုံ့ပြန်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်:
အားလုံးသင်တန်းသားများကိုလည်းစံအဖြေရှာတဲ့အင်တာဗျူးတွေ, အခြေခံလူဦးရေဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Self-အစီရင်ခံစာ Impulse သိုလှောင်မှုနှင့်ကွန်ပျူတာမှတ်ဥာဏ်ဘက်ထရီပြီးစီးခဲ့သည်။ စိတ်ရောဂါ comorbidity အဆိုပါ Mini ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါ Inventory (MINI) (သုံးပြီးအကဲဖြတ်ခဲ့သည်Sheehan et al ။ , 1998) လေ့ကျင့်သင်ကြားအဆင့်သတ်မှတ်သူသည်။ အားလုံးလေ့လာမှုလုပျထုံးလုပျနညျးဟယ်လ်စင်ကီ၏ကြေညာစာတမ်းနှင့်အညီဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ Institutional ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းမင်နီဆိုတာတက္ကသိုလ်ဘုတ်အဖွဲ့နှင့်ချီကာဂိုတက္ကသိုလ်ရဲ့လုပျထုံးလုပျနညျးမြားနှငျ့ပူးတှဲပါသဘောတူညီခကျြပုံစံများကိုအတည်ပြုခဲ့သည်။ အားလုံးသင်တန်းသားများကိုကြိုတင်လေ့လာမှုမှာပါဝင်ရေးသားအသိပေးသဘောတူညီခကျြပေးခဲ့သညျ။
2.1 ။ လက်တွေ့ဆောင်ရွက်ချက်များ
မင်နီဆိုတာ Impulse Disorders အင်တာဗျူး (MIDI) (Odlaug နှင့် Grant က, 2010): CSB, kleptomania, ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပေါက်ကွဲရောဂါ, လောင်းကစားရောဂါ, compulsive ဝယ်, အရေပြားရောဂါ, trichotillomania, pyromania ကောက်နေနှင့်မူးရူးရောဂါအစာစားခြင်း: အဆိုပါ MIDI အောက်ပါတို့အပါအဝင်အများအပြားချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်မမှန်များအတွက်ပေးပါသည်သော Self-အစီရင်ခံစာစာရင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်မှာရှိနိုင်ပါက, MIDI အသားအရေ Pick, trichotillomania, လောင်းကစားရောဂါနှင့်မူးရူးစားရောဂါအပါအဝင်တစ်ဦးချင်းစီမမှန်, သိရှိနိုင်ဖို့ DSM-5 သတ်မှတ်စံနှုန်းများကိုအသုံးပြုသည်။ အဆိုပါ MIDI (ကောင်းသောယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်အတူအများအပြားနမူနာအတွက်အရင်းခံတွန်းအားကိုထိန်းချုပ်မမှန်များ၏ပျံ့နှံ့အကဲဖြတ်ရန်ယခင်ကအသုံးပြုခဲ့ပြီးOdlaug နှင့် Grant က, 2010).
2.2 ။ self-အစီရင်ခံစာအစီအမံ
Barratt Impulse စကေး, ဗားရှင်း 11 (bis) (Barrett, 1959; Patton et al ။ , 1995): အဆိုပါ bis အာရုံစူးစိုက်မှု, မော်တာနှင့် Non-စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းအတိုင်းအတာကိုဖြတ်ပြီး Impulse တစ် Self-အစီရင်ခံစာအတိုင်းအတာဖြစ်ပါတယ်။ အတိုင်းအရှည်တစ်ဦးချင်းစီ 30 မှ 1 ( "ရှားပါးသော / ဘယ်တော့မှမ") ( "နီးပါးအမြဲတမ်း / အမြဲတမ်း") ၏တစ်စကေးအပေါ် rated အတူ4မေးခွန်းများကိုပါဝင်ပါသည်။ ဒုတိယအယူမှုကိုရမှတ်များအာရုံစိုက်မှု, မော်တာနှင့် Non-စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း Impulse ၏ရှုထောင့်အဘို့အအစီရင်ခံရသည်။
Rosenberg ကကိုယ်ပိုင်ချစ်ခင်လေးမြတ်စကေး (RSE) (Rosenberg က, 1965): အဆိုပါ RSE Self-လေးစားမှု၏အဆင့်ဆင့်အကဲဖြတ်ထားပါသည်သော 10 မေးခွန်းတစ်ခုကို Self-အစီရင်ခံစာစာရင်းဖြစ်ပါတယ်။ အကဲဖြတ်အချက်များမိမိကိုယ်ကိုနှင့်အတူစိတ်ကျေနပ်မှု၏ခံစားချက်များကို, တန်ဖိုးရှိနှင့်အခြားသူများအကြားမိမိကိုယ်ကိုဆီသို့ဦးတည်သဘောထားကိုပါဝင်သည်။ တုံ့ပြန်ချက် "လုံးဝ Agree" ဖို့ "လုံးဝသဘောမတူ" နှင့်ပေါင်းစပ်ရမှတ်လိုက်လျောကနေအထိ။
Emotion စည်းမျဉ်းဥပဒေစကေး (DERS) တွင်အခက်အခဲများ (Gratz နှင့် Roemer, 2004): အဆိုပါ DERS စိတ်ခံစားမှု dysregulation တစ် Self-အစီရင်ခံစာအတိုင်းအတာဖြစ်ပါတယ်။ အတိုင်းအရှည် ( "နီးပါးကိုအမြဲတမ်း") 36 ( "နီးပါးဘယ်တော့မှ") ကနေ 1 အထိတုံ့ပြန်မှုနှင့်အတူ5မေးခွန်းများကိုပါဝင်ပါသည်။ ဒီခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက်အတိုင်းအတာ၏ပစ်မှတ်ရှုထောင့်အတိုင်းအတာ၏စုပေါငျးရမှတ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ဘဝက Inventory (QOLI) (၏အရည်အသွေးFrisch et al ။ , 1992): အဆိုပါ QOLI အသက်တာ၏ရိပ်မိအရည်အသွေးတစ် 32 မေးခွန်းတစ်ခုကို Self-အစီရင်ခံစာအတိုင်းအတာဖြစ်ပါတယ်။ သင်တန်းသားများကိုပေးထားသောအချက် 0-2 နေစကေး, ပြီးတော့သူတို့ -3-3 တစ်စကေးအပေါ်ကြောင်းအချက်တစ်ချက်နှင့်အတူနေကြသည်ကိုဘယ်လိုစိတ်ကျေနပ်မှု၏အဖြေတစ်ခုအပေါ်ဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်၏အဖြေကိုပေးဖို့တောင်းနေကြသည်။ ဤရွေ့ကားတန်ဖိုးများထိုအချက်အဘို့ကျော့ကွင်းရမှတ်ပေးရများပြားကြ၏။ အချက်များထို့နောက်ကုန်ကြမ်းရမှတ်ပေးရချုပ်ဖော်ပြနေကြသည်။ ရမှတ်ထို့နောက် Frisch နေဖြင့်ဖော်ပြခဲ့သည်နည်းလမ်းများနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကို အသုံးပြု. နောက်ဆုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက် t-ရမှတ်သို့ကူးပြောင်းနေကြသည် (Frisch et al ။ , 1992).
2.3 ။ သိမှုအတိုင်းအတာ
Neurocognitive variable တွေကိုပုကင်းဘရစ် Neuropsychological စမ်းသပ်ခြင်း Automated ဘက်ထရီ (CANTAB) စနစ်သုံးပြီးအကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ အောက်ပါအကဲဖြတ်ဤခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းတွင်ထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်:
Intra- / Extra-ရှုထောင်သတ်မှတ်မည် Shift (IDED): အဆိုပါ IDED compulsive နှင့်ဆက်နွယ်သောသိမြင်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, အကဲဖြတ်ထားပါသည်။ တာဝန်စဉ်အတွင်းသင်တန်းသားများကိုလေးသေတ္တာများ, ပန်းရောင်ပုံစံမျိုးစုံဆံ့နှစ်ခုနှင့်အတူတင်ပြကြသည်။ သင်တန်းသားများကိုတဦးတည်းပုံသဏ္ဍာန် "မှန်ကန်သော" အဖြစ်ရွေးကောက်တော်မူခဲ့ပြီး, နှင့်ကျန်ရှိသော "မမှန်ကန်ကြောင်း" ကြောင်းပြောသည်နေကြသည်။ သူတို့ဟာပြီးတော့သူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်တတ်နိုင်သမျှအကြိမ်ပေါင်းများစွာမှန်ကန်သောပုံသဏ္ဍာန်ကို select လုပ်ဖို့ကြောင်းအကြောင်းကြားထားပါသည်။ မှန်ကန်သောရွေးချယ်မှုများအစုတခုအရေအတွက်ကိုပြီးနောက်, မှန်ကန်သောအဖြေကို (နှိုးဆွမှန်ကန်သောအရာဆိုလိုသည်မှာစိုးမိုးရေးအုပ်ချုပ်ရေး) တုံ့ပြန်ချက်ကနေလေ့လာသင်ယူနှင့်အသစ်သောစည်းမျဉ်း detect ဖို့တစ်ဦးချင်းစီလိုအပ်, ကွန်ပျူတာအားဖြင့်ပြောင်းလဲသွားသည်။ ဒီခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက်ပစ်မှတ် variable ကိုဘာသာရပ်ရောက်ရှိနိုင်ခဲ့သည်ကြောင့်အခက်အခဲများ၏အဆင့်ချိန်ညှိတာဝန်ချိန်အတွင်းလုပ်အမှားအယွင်းများ၏စုစုပေါင်းအရေအတွက်ကဖြစ်ခဲ့သည်။
ရပ်တန့် Signal Task ကို (SST): အဆိုပါ SST မော်တာ Impulse ၏ရောင်ပြန်ဖြစ်သည့်မော်တာတားစီး၏ရှုထောငျ့အကဲဖြတ်ထားပါသည်။ တာဝန်စဉ်အတွင်းကွန်ပျူတာလက်ဝဲသို့မဟုတ်လက်ယာဖြစ်စေရင်ဆိုင်ရကြောင်းမြှား၏ပာဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဘာသာရပ်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပြသထားသောလက်ဝဲနှင့်လက်ယာမြှားနှင့်အတူသက်ဆိုင်ရာနှစ်ခုခလုတ်များ၏တဦးတည်းကိုနှိပ်ဖို့တောင်းနေသည်။ ကွားနိုငျတဲ့လေ့ကျင့်ရေးအဆင့်ပြီးနောက်အချို့သောမြှားပြီးနောက်မိတ်ဆက်ကြသည်နှင့်သင်တန်းသားများကိုလာမယ့်မြှားပြသသည်အထိတစ်ဦး "Beep" ရှိထားတဲ့အပြီးမြှားတစ်ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်မညွှန်ကြားနေကြတယ် "beeps" ။ မြှားနဲ့အသံအကြားအချိန်ရဲ့အရှည်ကနဦးမော်တော်တုံ့ပြန်မှုဟန့်တားထဲမှာပါဝင်သူရဲ့အောင်မြင်မှုပေါ် မူတည်. အဆိုပါစမ်းသပ်မှု၏သင်တန်းကျော်ကွဲပြားခြားနားသည်။ task ကိုများအတွက်ပစ်မှတ်အတိုင်းအရှည် Stop-Signal တုံ့ပြန်မှုအချိန် (SSRT) ဖြစ်ပါသည်; ဒီ variable ကိုပုံမှန်လုပ်လိမ့်မည်ဟုတစ်တုံ့ပြန်မှုကိုရပ်တန့်ဖို့တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ဦးနှောက်အားဖြင့်ခေါ်ဆောင်သွားအချိန်ခန့်မှန်းသည်။ ကြာကြာ SSRTs ပိုဆိုးတုံ့ပြန်မှုတားစီးဖို့တူညီ။
ကင်းဘရစ်လောင်းကစား Task ကို (CGT): အဆိုပါ CGT အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေနှင့်လောင်းကစားဝိုင်းတာဝန်များ၏အခြေအနေတွင်စွမ်းရည်အောင်ဆုံးဖြတ်ချက်အကဲဖြတ်ထားပါသည်။ တာဝန်စဉ်အတွင်းသင်တန်းသားများကိုအနီရောင်သို့မဟုတ်အပြာဖြစ်စေရောင်စုံသူတို့၏အမျိုးအကွဲပြားအချိုးအစားနှင့်အတူဆယ်ပုံးတစ်စီးရီးပြနေကြသည်။ တစ်ဦးကသေးငယ်အဝါရောင်စတုရန်းဖော်ပြရန်သေတ္တာများထဲကတစ်ခုအောက်မှာဝှက်ထားလျက်ရှိ၏နှင့်သင်တန်းသားများက screen ပေါ်မှာမဆိုပေးထားသောအကွက်အောက်တွင်ဖြစ်ခြင်း၏တန်းတူအခွင့်အလမ်းရှိကြောင်းညွှန်ကြားလျက်ရှိသည်။ သင်တန်းသားများကိုပြီးတော့သူတို့ကအဝါရောင်စတုရန်းအောက်မှာယုံကြည်အရောင်သေတ္တာရာမှသက်ဆိုင်ရာ, သေတ္တာများ၏အနီရောင်အစုံသို့မဟုတ်သေတ္တာများတို့၏အပြာ set ကိုဖြစ်စေ select လုပ်ဖို့တောင်းနေကြသည်။ ရွေးချယ်ခြင်းပြီးနောက်, ပါဝင်သူအဝါရောင်စတုရန်းအောက်ပေါ်လာပါလိမ့်မည်သည့်အရောင်သူတို့မှန်မှန်ကန်ကန်ဖော်ထုတ်သောထိုသူတို့၏အာမခံဖို့သက်ဆိုင်ရာ, သူတို့၏ "ပွိုင့်ဘဏ်" မှအလောင်းအစားတစ်ခုအမှတ်စုစုပေါင်းရွေးချယ်ပါတယ်။ အဆိုပါအချက်များကိုတဖြည်းဖြည်းစုစုပေါင်းရရှိနိုင်ပါသည်အမှတ်%5မှ 95% ကနေ (task ကိုတဆင့်ဝက်လမ်းလျော့ကျလာပြောင်းရန်) အမှတ်တန်ဖိုးများကိုတိုးမြှင့်ပြသသောမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်အခြား box ထဲကရွေးချယ်ထားသည်။ မှန်ကန်သောလျှင်, အချက်များအနာဂတ်စမ်းသပ်မှုများတွင်အသုံးပြုရန်အတွက်နှစ်ဆတိုးလျက်ရှိသည်; မှားယွင်းနေလျှင်, ပါဝင်သူအဆိုပါ wagered အချက်များရှုံးသည်။ တိုင်းများအတွက်ပစ်မှတ် variable တွေကိုခြုံငုံအချိုးအစားလောင်း, ဆုံးဖြတ်ချက်ချ၏အရည်အသွေးနှင့်အန္တရာယ်ညှိနှိုင်းမှုဖြစ်ကြသည်။ ယေဘုယျအားအချိုးအစားအလောင်းအစားပါဝင်သူပုံမှန်အားတာဝန်များ၏သင်တန်းကာလအတွင်းရှေးခယျြခဲ့ရရှိနိုင်ပါအချက်များကို၏အချိုးအစားပြသထားတယ်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်း၏အရည်အသွေးဟာပါဝင်သူအဝါရောင်စတုရန်း်၏အကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်အတူသက်ဆိုင်ရာ, မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်အကြီးမြတ်ဆုံးအရေအတွက်ကပစ္စုပ္ပန်နှင့်အတူအရောင် box ကိုရှေးခယျြခဲ့အကြိမ်အချိုးအစားကိုရောင်ပြန်ဟပ်။ စွန့်စားမှုညှိနှိုင်းမှုညွှန်ပြနဲ့သူတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုမှန်ကန်ဖြစ်ခြင်း၏အလေးသာပေါ်အခြေခံပြီးအလောင်းအစားပုံစံများကိုပြုပြင်မွမ်းမံဖို့တစ်ဦးချင်းစီရဲ့စိတ်သဘောထား (ဥပမာ 1 များအတွက်လျော့နည်းအလောင်းအစား: 1 များအတွက်4လေးသာမှုနှင့်ထို့ထက် ပို. : 1 လေးသာမှု) ။
Spatial အလုပ်အဖွဲ့မှတ်ဉာဏ် (SWM): အဆိုပါ SWM Spatial သတင်းအချက်အလက်ဆက်ပြီးနှင့်ကြိုးကိုင်နှင့်ဆက်စပ်သော Spatial အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်အကဲဖြတ်ထားပါသည်။ အဆိုပါတာဝန်မျိုးစုံရင်ပြင််ပဟေဠိတစ်ခုစီးရီးပါဝင်သည်။ သင်တန်းသားများကိုသေးငယ်အပြာရောင်ရင်ပြင်အဆိုပါရင်ပြင်အောက်မှာဝှက်ထားပြီညွှန်ကြားလျက်ရှိသည်တစ်ကြိမ်ပြသဖြင့်, သူတို့မျက်နှာပြင်ရဲ့အစွန်းမှာပြသနေတဲ့ဘားတန်းကိုဖြည့်ဖို့လုံလောက်တဲ့ရှာတွေ့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာပြီးတော့တခါပိုကြီးတဲ့ box ကိုအောက်တွင်ပြာသေတ္တာကိုရှာတွေ့ပြီးနောက်, ထိုသို့အထူးသဖြင့်ပဟေဠိ၏ကျန်ရှိသောအဘို့အကြောင်းတည်နေရာအတွက်အခြားတွေ့ရှိရန်မဖြစ်နိုင်ပါကြောင်းအကြောင်းကြားထားပါသည်။ ဒီတာဝန်များအတွက်ပစ်မှတ် variable တွေကိုပုပဟေဠိဖြေရှင်းရေးအခါပါဝင်သူအောက်မှာမျှအပြာစတုရန်းနှင့်အတူကြီးမားတဲ့စတုရန်းနှင့်အသုံးပြုသည့်မဟာဗျူဟာ၏အရည်အသွေးရွေးချယ်ရသောတာဝန်ချိန်အတွင်းလုပ်အမှားအယွင်းများစုစုပေါင်းအရေအတွက်က (အနိမ့်မဟာဗျူဟာရမှတ်များပိုမိုကောင်းမွန်မဟာဗျူဟာမှတူညီနေသည် အသုံးပြုမှု) ။
ကင်းဘရစ်တစ်ခုမှာ Touch ကိုစတော့ရှယ်ယာ (OTS): အဆိုပါ OTS အလုပ်အမှုဆောင်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းကျွမ်းကျင်မှုအကဲဖြတ်ထားပါသည်နှင့်လန်ဒန်အလုပ်တခုကို၏ဂန္မျှော်စင်မှအလားတူလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအောက်ပါအတိုင်း။ အဆိုပါပါရာဒိုင်းစဉ်အတွင်းသင်တန်းသားများကိုမျက်နှာပြင်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းမှာပြဥပမာတစ်ခုကိုက်ညီဖို့ screen ပေါ်မှာပြသပြွန်၏အစုံအကြားဘောလုံးရွေ့လျားမြင်ယောင်ဖို့တောင်းနေကြသည်။ စိတ်ပိုင်းအဆိုပါပဟေဠိဖြေရှင်းရေးအပေါ်သို့, သူတို့ကဒါဆိုသူတို့ 1-9 မျက်နှာပြင်၏အောက်ခြေတွင်ပြသထံမှပဟေဠိနံပါတ်များစာရင်းတစ်ခုကနေယူပါလိမ့်မယ်ယုံကြည်ရွေ့လျား၏နိမ့်ဆုံးအရေအတွက်ကမထိဖို့တောင်းနေကြသည်။ အရှင်ဆန်းစစ်များအတွက်ပစ်မှတ်အတိုင်းအတာတာဝန်စဉ်အတွင်းပထမဦးဆုံးရွေးချယ်မှုအပေါ်ဖြေရှင်းပဟေဠိ၏နံပါတ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
PSB ဘာသာရပ်များ၏လူ ဦး ရေဆိုင်ရာ၊ လက်တွေ့နှင့်သိမြင်မှုလက္ခဏာများကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲနိုင်သောသီးခြားလွတ်လပ်သော t-test များ (ကျောင်းသား၏စမ်းသပ်မှုများ၊ သို့မဟုတ် Welsh အုပ်စုများအကြားမတူညီသောကိန်းဂဏန်းများဖြင့်စမ်းသပ်မှုများ) နှင့် chi-square (သို့မဟုတ် Fisher's) တို့ကိုနှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည်။ အမျိုးအစား variable တွေကိုများအတွက်) သေးငယ်တဲ့ဆဲလ်အရွယ်အစားအတိအကျစမ်းသပ်မှု။ p တန်ဖိုးများအားလုံးသည်နှစ် ဦး၊ အမြီး၊ အဓိပ္ပာယ်ကို p.05 ဟုသတ်မှတ်သည်။ လေ့လာမှု၏စူးစမ်းလေ့လာမှုသဘောသဘာဝကြောင့်မျိုးပွားမှုအတွက်ပြင်ဆင်ခြင်းမရှိပါ။ Bonferroni အားပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းသည်ဤရှာဖွေစူးစမ်းမှုဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအတွက်အလွန်အမင်းရှေးရိုးစွဲဖြစ်နေနိုင်သည် (၂၆ တွင်ကြည့်ပါ) ။ ဒီလေ့လာမှုအတွက်ရရှိတဲ့နမူနာအရွယ်အစားနဲ့အတူလေ့လာမှုတစ်ခုက variable တစ်ခုပေါ်ရှိအုပ်စုများအကြားကိန်းဂဏန်းဆိုင်ရာသိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်ကိုသိနိုင်ဖို့အလယ်အလတ်အကျိုးသက်ရောက်မှုအရွယ် 26 နှင့် alpha = 80 (ဆိုလိုသည်မှာ Bonferroni ဆုံးမပဲ့ပြင်ခြင်းမရှိခြင်း) ကို ~ 0.4% စွမ်းအားရှိခဲ့သည်။ Bonferroni ပြင်ဆင်မှုကိုအသုံးပြုခဲ့ပါကလေ့လာမှုတစ်ခုအနေဖြင့်သတ်မှတ်ထားသောအတိုင်းအတာအပေါ်ထိုကဲ့သို့သောအုပ်စုကွဲပြားမှုကိုရှာဖွေရန်စွမ်းအား <၄၀% ရှိလိမ့်မည်၊ ၎င်းမှာလက်သင့်မခံနိုင်သောအမျိုးအစား ၂ အမှားဖြစ်နိုင်သည်။
effect အရွယ်အစားကိုလည်းတွက်ချက်ခဲ့ကြသည်။ အုပ်စုများအကြားယုတ်ခြားနားချက်များစုံ၏တန်းတူရေးအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုအရွယ်အစား Cohen ကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုအရွယ်အစားအညွှန်းကိန်း ( "ဃ") ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ဖော်ပြခဲ့သည်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအမျိုးအစားများ (Χ2စမ်းသပ်မှု) ၏2အစုတခုကျော်2သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုဖြန့်ဝေ၏တန်းတူရေး၏စမ်းသပ်မှုအပေါ်အခြေခံထားတယ် ( "w") ။ .2 တစ်ဃသေးငယ်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုအရွယ်အစားစဉ်းစားသည်, .5 အလတ်စားဖြစ်ပြီး, .8 ကြီးမားသည်, .1 ၏ aw အသေးစားစဉ်းစားသည်, (.3 အလတ်စားဖြစ်ပြီး, .5 ကြီးမားသည်Cohen ကို, 1988).
စုစုပေါင်း ၅၄ ဦး (၁၁%) တက်ရောက်သူသည်လက်ရှိ PSB ကိုအစီရင်ခံတင်ပြခဲ့သည်။ ဆန်းစစ်ချက်အရ PSB အုပ်စုသည်သိသိသာသာသက်ကြီးရွယ်အိုများဖြစ်ကြောင်း (p = .54)၊ အစောပိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ (p = .11) နှင့်အရက်သုံးစွဲခြင်း (p <.005) နှင့်ပိုမိုမြင့်မားသောခန္ဓာကိုယ်ထုထည်ညွှန်းကိန်းရှိကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ p = .031) ။
Self-report အစီအမံများအတွက် PSB အုပ်စုသည် BIS ၏အတိုင်းအတာခွဲသုံးခုစလုံးတွင်သိသိသာသာမြင့်မားသောရမှတ်များ (အာရုံစိုက်မှု - p = .008; motor: p = .002; non-planning: p = .002), အထွေထွေမိမိကိုယ်ကိုနိမ့်ခဲ့သည် -esteem (p <.001)၊ သာလွန်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ (p = 0.002) နှင့်ဘဝအရည်အသွေးနိမ့်သည် (p <.001) အကြေးခွံများအတွက်အတွင်းသဟဇာတဖြစ်မှုသည်ကောင်းသည် (Cronbach ၏ alpha 0.79 နှင့်အထက်) ။
သိမြင်မှုတွေ့ရှိချက်၏စည်းကမ်းချက်များ၌, ထိန်းချုပ်မှုနှိုင်းယှဉ်သည့် PSB အုပ်စုတစ်စုပိုဆိုးခြုံငုံ Spatial အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ် (ကို p = .005), Spatial အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်မဟာဗျူဟာ (p = .028), မော်တာတားစီး (p = .048) နှင့်အလုပ်အမှုဆောင်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း (p = ပြသ .028) ။ အဆိုပါ PSB အုပ်စုတစ်စုကိုလည်းထိန်းချုပ်မှု (p = .008) သာရှိပြီးပြည်ပမှအဆိုပါ CGT ကာလအတွင်း၎င်းတို့၏စုစုပေါင်းရမှတ်တစ်သိသိသာသာ သာ. ကြီးမြတ်အချိုးအစားအလောင်းအစား။
Barratt alpha = 0.80, DERS = 0.79: အောက်ပါအတိုင်းလေ့လာမှုမှာအသုံးပြုတဲ့အဓိကအကြေးခွံများအတွက် Cronbach ရဲ့ alpha ခဲ့ကြသည်
ရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှုန်းသည်အုပ်စုနှစ်ခုအကြားသိသိသာသာကွာခြားသည်။ PSB အုပ်စုသည်စိတ်ကျရောဂါအဓိကရောဂါ (p <.001)၊ မိမိကိုယ်ကိုသတ်သေခြင်း (p = .038)၊ agoraphobia (p = .010)၊ အရက်သောက်သုံးခြင်းရောဂါ (p <.001) အပါအဝင်အထွေထွေစိတ်ရောဂါဆိုင်ရာရောဂါအများစု၏ပျံ့နှံ့မှုနှုန်းကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ နှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောဂါ (p = .001) ။ PSB အုပ်စုကလည်းလောင်းကစားမှုပြန့်ပွားမှုနှုန်း (p = .018) နဲ့မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရောဂါ (p = .034) ကိုပိုမိုစိတ် ၀ င်စားမှုရှိတယ်လို့အစီရင်ခံခဲ့သည်။
ပစ္စုပ္ပန်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခုနှစ်, 54 ပါဝင်သူ (11%) လက်ရှိ PSB သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းဤပျံ့နှံ့, ငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက် (ခုနှစ်တွင်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအတွက်အစီရင်ခံတင်ပြသည့်ပျံ့နှံ့မှုနှုန်းထက် ပို. မြင့်မားသည်Black က et al ။ , 1997; Derbyshire နှင့် Grant က, 2015). ဤသည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလည်း PSB အသက်တာ၏ပိုဆိုးအရည်အသွေး, အနိမ့် Self-လေးစားမှုနှင့်အတော်ကြာမမှန်ဖြတ်ပြီး comorbidities မြင့်မားမှုနှုန်းနှင့်ဆက်နွယ်ခဲ့ညွှန်ပြ။ ထို့ပြင် PSB အုပ်စုတစ်စုမော်တာတားစီး, Spatial အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းတစ်ခုရှုထောင့်အပါအဝင်အများအပြား neurocognitive domains များ, ဖြတ်ပြီးလိုငွေပြမှုပြသခဲ့သည်။
ဒီခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထံမှတစ်ခုမှာထင်ရှားတဲ့ရလဒ် PSB နိမ့် Self-လေးစားမှုအပါအဝင် deleterious လက်တွေ့အချက်များ၏နံပါတ်နှင့်အတူသိသာအသင်းအဖွဲ့များပြသထားတယ်, အသက်ရှင်ခြင်း၏အရည်အသွေးယုတ်လျော့သည် BMI တိုးမြှင်နှင့်အတော်ကြာမမှန်များအတွက်ပိုမိုမြင့်မား comorbidity နှုန်းထားများ။ ဒီအသင်းအဖွဲ့များအတွက်အလားအလာရှင်းပြချက် PSB သည်ဤသည်အခြားပြဿနာများကိုတိုးချဲ့ရာမှနောက်ခံပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ အလားတူလူဦးရေအပေါ်ယခင်သုတေသန (ထိုကဲ့သို့သောအရှက်ကွဲခြင်းအဖြစ် features တွေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနဲ့အတူရုန်းကန်နေလူနာအကြားဘုံဖြစ်ကြောင်းမှတ်ချက်ပြုထားသည်Dhuffar နှင့် Griffiths က, 2014; ရိဒ် et al ။ , 2014) ။ ဤအင်္ဂါရပ်နှင့်မိမိကိုယ်ါဆက်ဆံရေးနှင့်အတူရောယှက်စေခြင်းငှါအဖြစ်ကလူမှုရေးအရအထီးကျန်ခံစားရနှင့် stigmatized တဲ့သူတစ်ဦးချင်းစီအသက်တာ၏အနိမ့် Self-လေးစားမှုနှင့်အရည်အသွေးထောက်ခံဖို့ပိုဖွယ်ရှိစေခြင်းငှါဖြစ်နိုင်ခြေဖြစ်သကဲ့သို့ဤသူတို့သတွေ့ရှိချက်, ပစ္စုပ္ပန်ဒေတာတွေနဲ့ကိုက်ညီဖြစ်ကြသည်။ ထို့ကွောငျ့ PSB အရက်မှီခိုခြင်းနှင့်စိတ်ကျရောဂါကနေအသက်တာ၏အရည်အသွေးနှင့် Self-လေးစားမှုအတွက်ယိုယွင်းပျက်စီးလာအထိအလယ်တန်းပြဿနာများဟာ host မှမြင့်တက်ပေးဖြစ်နိုင်။ ဤသည်စရိုက်လက္ခဏာတွေကကုသမှုစဉ်အတွင်းတိုက်ရိုက် PSB နှင့်အတူပြဿနာများကိုဖြေရှင်းခြင်းဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောစိတ်ကျရောဂါနှင့်အရက်သုံးစွဲခြင်းအဖြစ်အလယ်တန်းလက္ခဏာတွေ ameliorate ဖြစ်နိုင်ဖြစ်နိုင်သည်ညွှန်ပြလိမ့်မယ်။
ပြောင်းပြန်က PSB အစားထိုကဲ့သို့သောအရက်သုံးစွဲခြင်းသို့မဟုတ်စိတ်ကျရောဂါအတိုင်းဤခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက်ဖော်ထုတ်များပြားလှသည်အခြားပြဿနာများ, တုန့်ပြန်ဖြစ်ပေါ်တစ်ဦးကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းယန္တရားအဖြစ်သွင်ပြင်လက္ခဏာသင့်ကြောင်းလည်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဒီရှုထောင့်ကနေ, အစားအပိုဆောင်းပြဿနာများ elicits သော core ကိုရောဂါဗေဒအဖြစ် PSB characterizing ထက်, ကအစားထိုကဲ့သို့သောစိတ်ကျရောဂါအတူလိုက်ပါစေခြင်းငှါသူတို့အအဖြစ်မြဲအနုတ်လက္ခဏာစိတ်ခံစားမှုနှင့်စိတ်ခံစားမှုနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်မယ့်နည်းလမ်းအဖြစ်ကိုရိပ်မိနိုင်ပါသည်။ ဤသည်စရိုက်လက္ခဏာတွေအထူးသဖြင့်စိတ်ခံစားမှု dysregulation ၏ သာ. ကွီးမွတျအဆငျ့ဟာ PSB အုပ်စုဖော်ထုတ်, ပစ္စုပ္ပန်တွေ့ရှိချက်များအများအပြားရှုထောင့်နှင့်အတူကိုက်ညီ။ တဦးတည်းဖြစ်နိုင်ခြေဆင်းရဲသောသူတို့သည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီသူတို့ခံစားချက်နှင့်အတူပြဿနာများကိုစီမံခန့်ခွဲရန်ရုန်းကန်ရသောစဉ်အတွင်းစိတ်ကျဝေဒနာ၏ကာလ, တွေ့ကြုံခံစားဖို့ပိုများပါတယ်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဒီအခက်အခဲတစ်ခုတုံ့ပြန်မှုအဖြစ်, သူတို့ကထိုကဲ့သို့သောအရက်အဖြစ် PSB သို့မဟုတ်အခြားအပြုအမူတွေ၏ပုံစံသည်, PSB အုပ်စုတစ်စုအကြားအခြားဘုံဆခွဲကိန်းယူနိုင်တဲ့အရာဟာသူတို့ရဲ့ခံစားချက်, ခေါင်းရင်းမှအခြားရွေးချယ်စရာနည်းလမ်းတွေကိုလိုက်လိမ့်မည်။ ဤသည်အများအပြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူပို compulsive ပုံစံများမြားတှငျပါဝငျခွငျးရှိသူများအကြားတစ်ဦးထက်ပိုထူးခြားတဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုညွှန်းနှင့်အတူ, စိတ်ကျရောဂါသို့မဟုတ်စိုးရိမ်ပူပန်မှု၏ပြည်နယ်များအတွက် သာ. ကြီးမြတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားမှုပြသသော disorders လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်ယခင်လေ့လာမှုများ, နှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ပါသည် (Bancroft နှင့် Vukadinovic, 2004; Grov et al ။ , 2010; Lykins et al ။ , 2006). ဒီရှုထောင့်ကနေ, အစားကုသမှုများအတွက် Focal Point သည်အဖြစ်မဆိုအထူးသဖြင့်လက်တွေ့ပြဿနာဖော်ထုတ်ထက်, ကထွက်ရှိသောအတိတ်တွင်ပြဿနာဖြစ်ရပြီကြောင်းလှုပ်ရှားမှုများနှင့်အပြုအမူအပေါ်အားကိုးမဖြေရှင်းယန္တရားများပံ့ပိုးလူနာစိတ်ခံစားမှုစည်းမျဉ်းနှင့်အတူပြဿနာများကိုစီမံခန့်ခွဲကူညီဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်ပါသည် ထိုကဲ့သို့သော PSB အဖြစ်။
ဤအဖြစ်နိုင်ချေနှစ်ခုစလုံးကြောင်းကျိုးဆက်စပ်၏ကွဲပြားလမ်းညွန်သုံးပြီးလက်ရှိတွေ့ရှိချက်အဘို့အလားအလာရှင်းလင်းချက်ပူဇော်နေစဉ်, က PSB အုပ်စုတွင်ဖော်ထုတ်ခဲ့သည့်နေရာလက်တွေ့ features တွေအမှန်တကယ် PSB နှင့်အခြားလက်တွေ့ features တွေနှစ်ဦးစလုံးမှမြင့်တက်ပေးသောတစ်ကောလိပ်, တက္ကသိုလ် variable ကို၏ရလဒ်ဖြစ်ကြောင်းလည်းဖြစ်နိုင် ။ ဒီအခန်းကဏ္ဍဖြည့်တစ်ဦးကအလားအလာအချက်အတွက် PSB အုပ်စုတွင်ဖော်ထုတ်ခဲ့သည့်နေရာ neurocognitive လိုငွေပြမှု, အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်, Impulse / ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းအထူးသဖြင့်သူတို့အားဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီစရိုက်လက္ခဏာတွေကနေ, ကအထူးသဖြင့်သိမြင်လိုငွေပြမှုငှါ, PSB အတွက်ထင်ရှားပြဿနာတွေနဲ့ထိုကဲ့သို့သောစိတ်ခံစားမှု dysregulation အဖြစ်နောက်ထပ်လက်တွေ့ features တွေ, ခြေရာကောက်ရန်ဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါ bis နှင့် SSRT နှစ်ခုစလုံး PSB အုပ်စုကိုသိသိသာသာသည်အခြားသင်တန်းသားများကိုပိုမိုထကြွလွယ်သောဖြစ်ခဲ့သည်ကွောငျးဖျောပွခဲ့အဖြစ် Impulse နှင့်ဆက်စပ်သောကိစ္စများ, အထူးသဖြင့်သိသာဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဤသည်ရှင်းပြချက်ကိုလည်း Impulse နှင့်အတူပြဿနာများ PSB နှင့်အခြားပြဿနာများကိုစတင်ခြင်းထက်တစ်အစောပိုင်းကအသက်အရွယ်ထံမှထင်ရှားစေခြင်းငှါအကြံပြုခြင်း, ထိုကဲ့သို့သောပထမဦးဆုံးလိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အရက်သုံးစွဲခြင်း၏အစောပိုင်းအသက်အရွယ်အဖြစ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအခြားတွေ့ရှိချက်များနှင့်အတူသင့်လျော်သည်။
PSB နှင့်အတူသင်တန်းသားများကိုဖော်ထုတ်ဗဟိုဝိသေသအဖြစ် neurocognition သီးခြားအသုံးပြုပုံလက်ရှိတွေ့ရှိချက် PSB နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီကိုကောင်းစွာ-ညှိနှိုင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့လိုအပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်အတူရုန်းကန်စေခြင်းငှါဤ neurocognitive ကိစ္စများ၏သရုပ်ယခင်ကအစီရင်ခံစိတ်ခံစားမှုစည်းမျဉ်းနှင့်အတူအခက်အခဲများမှမြင့်တက်ပေးကြောင်းအကြံပြုနိုင်ပြီး ထိရောက်သောဖြေရှင်းယန္တရားများ။ ထို့အပွငျ, Impulse နှင့်အတူအဆိုပါကိစ္စရပ်များကိုအဆိုပါ SSRT ပေါ်တွင်တွေ့မြင်မော်တာတားစီးအတွက်လိုငွေပြမှုနှင့်အတူတသမတ်တည်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့မော်တာချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်နိုင်စွမ်းအယှက်နိုင်. ဤခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအတွက်ဖော်ထုတ်ခဲ့သည့်နေရာသိမြင်မှုပြဿနာများကိုအမှန်တကယ် PSB ၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များမှာလျှင်ဤမှတ်သားလောက်လက်တွေ့သက်ရောက်မှုရှိစေခြင်းငှါ။ အဲဒီအစား PSB သို့မဟုတ် comorbid ပြဿနာများကိုဖြစ်စေဆက်စပ်သောပြဿနာများကိုဆက်ဆံဖို့အလုပ်လုပ်ခြင်းထက်, က neurocognition အတွက်အခြေခံပြဿနာများကိုဖြေရှင်းရန်ပိုမိုထိရောက်သောဖြစ်နိုင်သည်။ PSB နှင့်အတူလူနာများ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဖို့ပိုပြီးတိုက်ရိုက်ကုသမှုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ရန်အလို့ငှာ, Clinician Impulse ဖျန်ဖြေခြင်း, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ dysregulation စီမံခန့်ခွဲဖို့ပိုပြီးတသမတ်တည်းဖြေရှင်းယန္တရားများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့မဟာဗျူဟာများကိုအလေးပေးသောကုသမှုအတွက်ရွေးချယ်စရာများဖွံ့ဖြိုးနိုင်ပေမည်။
ပစ္စုပ္ပန်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့အတော်ကြာန့်အသတ်, သို့သော်, ရှိခဲ့သည်။ တဦးတည်းကိစ္စနမူနာသာငယ်ရွယ်လူကြီးများပါဝင်သည့်ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ဤခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသာနာမကျန်း၏ကြီးမြတ်သောကြာချိန်ပြီးနောက်ကိုထင်ရှားစွာပြကြောင်းသိမြင်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်လက်တွေ့အသင်းအဖွဲ့များကိုဖမ်းယူမပြုခဲ့ကြောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင်လက်ရှိလေ့လာမှုပြင်းထန်မှုများတဲ့ရှုထောင်အတိုင်းအတာမပါဝင်ခဲ့ပါဘူး (ကြှနျုပျတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ဤ subsyndromal အဆငျ့အဘို့အဘယ်သူမျှမပြင်းထန်မှုအတိုင်းအတာသတိပြုမိကြသည်) (ရိဒ်, 2015), ထိုသို့ PSB ၏ပြင်းထန်မှုအပေါ် neurocognition ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအကဲဖြတ်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါဖြစ်ခဲ့သည်။ ကြောင့်ဒီကန့်သတ်ခြင်းငှါ, ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသောဤအချက်များမည်သည့် PSB ၏တိကျသောရှုထောင့်သို့မဟုတ် PSB လက္ခဏာတွေခြုံငုံပြင်းထန်မှုနှင့်အတူသိသာအသင်းအဖွဲ့များပြသရှိမရှိမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူး။ နမူနာအရွယ်အစားစာရင်းအင်းအာဏာလက်မခံနိုင်အရှုံးမရှိဘဲဤဖွင့်ဖို့လုံလောက်သောမဟုတ်ခဲ့အဖြစ်ကျနော်တို့မျိုးစုံနှိုင်းယှဉ်ဘို့အပြင်ပေးမပေးခဲ့ပါဘူး။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများပိုကြီးတဲ့နမူနာတွင်ဤတွေ့ရှိချက်များ၏ပွားကြိုးစားရန်အဘို့အဒါကြောင့်အရေးကြီးသောဖြစ်လိမ့်မည်။ အမျိုးအစားအချက်အလက်များ၏အချို့ cell အရွယ်အစားသေးငယ်တဲ့တို့သတိထားအနက်အတွက်မျက်ခြေမပြတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်အချို့ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်မမှန်နှစ်ဦးစလုံးအုပ်စုများအတွက်အတော်လေးဆန်း ရှိ. , အုပ်စုတစုကွဲပြားမှု detect လုပ်ဖို့ဤအရပ်မှစာရင်းအင်းပါဝါန့်အသတ်ကြပြီ။
ပစ္စုပ္ပန်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသောဤအချက်များအဘို့အကြောင်းကျိုးဆက်စပ်၏ညှနျကွားဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းဖြစ်သော်လည်းက PSB နှင့်အတူလူနာထိခိုက်သည့်အဓိကပြဿနာများကိုမီးမောင်းထိုးပြပါဘူး။ These တွေ့ရှိချက်ပိုမိုမြင့်မား comorbidity နှုန်းထားများအပါအဝင်ပြဿနာများကိုတစ်အရေအတွက်နှင့်အတူ PSB ရုန်းကန်နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီ, သာ. ကြီးမြတ်စိတ်ခံစားမှု dysregulation နှင့် neurocognitive လိုငွေပြမှုကို select ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ တစ်ဦးချင်းစီ၏အများစုကျန်းမာ, အပြုသဘောဆောင်တဲ့ထုံးစံ၌လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူချဉ်းကပ်နိုင်ကြသည်နေစဉ်, ဒီပြဿနာတွေကိုသည်ဤအပြုအမူကိုထိန်းချုပ်ပေးဖို့ရုန်းကန်သောသူတို့အဘို့, ဆက်စပ်ပြဿနာများအသက်တာ၏အရည်အသွေးအပေါ်ထူးဆန်းသောအကျိုးသက်ရောက်မှုသာယာဝပြောရေးမဆိုများစွာသောအခြားရှုထောငျ့ရှိနိုင်သည်ကိုအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် PSB နောက်ထပ်အများကြီးအသက်အရွယ်နှင့်ကျား, မအုပျစုမြားကိုဖြတ်ပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူပြဿနာများအတွက်စိစစ်၏အရေးပါမှုကိုမီးမောင်းထိုးပြ, ဖွယ်ရှိငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူလူဦးရေနဲ့အလုပ်လုပ် Clinician များအတွက်အရေးပါသောထည့်သွင်းစဉ်းစားဖြစ်ပါတယ်။ Clinician PSB နှင့်အတူလူနာအတွက်ထင်ရှားထူးခြားတဲ့ neurocognitive ပရိုဖိုင်းကိုအပေါ်အခြေခံပြီးပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့စိစစ်နှင့်ကုသမှုအလေ့အထများအကောင်အထည်ဖေါ်ရန်အဘို့အဖြစ်နိုင်ဖြစ်နိုင်သည်အဖြစ်ကုသမှု neurocognition ၏အရေးပါမှုကိုအကဲဖြတ်အနာဂတ်သုတေသနအလွန်အကျိုးရှိသောဖြစ်နိုင်သည်။ PSB အပေါ်ဒေတာန့်အသတ်ရှိနေဆဲနေစဉ်, ပစ္စုပ္ပန်တွေ့ရှိချက် PSB နှင့်အတူရုန်းကန်တစ်ဦးချင်းစီအတွက် neurocognition နှင့်လက်တွေ့တင်ဆက်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုတိုးချဲ့နှင့်ရှင်းလင်း၏အရေးပါမှုကိုမီးမောင်းထိုးပြ။
ပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနဲ့အတူနှင့်မရှိရင်လူငယ်လူကြီးများအကြား Comorbidity ကွဲပြားခြားနားမှု
ဒါဟာသုတေသနတာဝန်ရှိဂိမ်းများအတွက်အမျိုးသား Center ကနေထောက်ပံ့ငွေ (သုတေသန Grant ကလောင်းကစားအတွက် Excellence ၏စင်တာများ) ကထောက်ခံခဲ့သည်။
ဒေါက်တာ Grant သည် National Responsible Gaming Center မှသတ်သေမှုကာကွယ်တားဆီးရေးအမေရိကန်ဖောင်ဒေးရှင်း၊ Brainsway နှင့် Forest, Takeda နှင့် Psyadon Pharmaceuticals မှသုတေသနထောက်ပံ့ငွေများကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ သူသည်လောင်းကစားလေ့လာရေးဂျာနယ်၏အယ်ဒီတာချုပ်အဖြစ်လုပ်ကိုင်ခြင်းအတွက် Springer Publishing မှနှစ်စဉ်လျော်ကြေးငွေရရှိခဲ့ပြီး Oxford University Press၊ American Psychiatric Publishing, Inc. , Norton Press, McGraw Hill နှင့် Johns Hopkins University Press မှချီးမြှင့်ခြင်းခံရသည်။ ဒေါက်တာ Chamberlain သည်ဤသုတေသနတွင်ပါ ၀ င်မှုကိုဆေးသိပ္ပံအကယ်ဒမီမှထောက်ပံ့ငွေဖြင့်ထောက်ပံ့သည်။ ဒေါက်တာ Chamberlain သည် Cambridge Cognition အတွက်တိုင်ပင်သည်။ မစ္စတာ Leppink နှင့် Ms. Redden တို့သည်စီးပွားရေးဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားများနှင့်ဘဏ္financialာရေးဆက်နွယ်မှုမရှိကြောင်းအစီရင်ခံတင်ပြကြသည်။
1 ။ Agrawal တစ်ဦးက, Bucholz KK, Lynskey MT ။ အန္တရာယ်ရှိသောအသုံးပြုမှုကြောင့် DSM-IV အရက်အလွဲသုံးစားမှု: အလွဲသုံးစားမှုတစ်လျော့နည်းပြင်းထန်ပုံစံ? J ကိုလုံးအရက်မူးယစ်ဆေးဝါး။ 2010; 71: 857-863 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
2 ။ Bancroft J ကို, Vukadinovic Z. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Impulse, ဒါမှမဟုတ်ဘာလဲ? တစ်သီအိုရီမော်ဒယ်ဆီသို့။ J ကိုလိင် Res ။ 2004; 41: 225-234 ။ [PubMed]
3 ။ Barratt ES ။ Psychomotor စွမ်းရည်မှ Related စိုးရိမ်စိတ်နှင့် Impulse ။ အမြင် Mot ကျွမ်းကျင်မှု။ 1959; 9: 191-198 ။
4 ။ Black က DW, Kehrberg ll, Flumerfelt DL, Schlosser အက်စ်အက်စ်။ compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအစီရင်ခံ 36 ဘာသာရပ်များ၏ဝိသေသလက္ခဏာများ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1997; 154: 243-249 ။ [PubMed]
5 ။ Carneiro အီး, Tavares H ကို, Sanches M က, Pinsky, ငါ Caetano R ကို, Zaleski က M, အထွေထွေလူဦးရေထဲကနေမှာ-အန္တရာယ်လောင်းကစားသမားတွေတစ်နမူနာအတွက် Laranjeira R. လောင်းကစားစတင်ခြင်းနှင့်တိုးတက်မှု။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res ။ 2014; 216: 404-411 ။ [PubMed]
6 ။ Chen က CM, Dufour MC, ရီ hy ။ အဆိုပါ 18-24 NESARC စစ်တမ်းကနေရလာဒ်: ငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက်အသက်အရွယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ 2001-2002 အကြားအရက်သောက်။ အရက် Res ကနျြးမာရေး။ 2005; 28: 269-280 ။
7 ။ ယင်းအပြုအမူသိပ္ပံအဘို့အ Cohen ကိုဂျေစာရင်းအင်းပါဝါအားသုံးသပ်ခြင်း။ ဒုတိယ ed ။ ပညာရေးဆိုင်ရာစာနယ်ဇင်း; နယူးယောက်: 1988 ။
8 ။ Courtney Ke, Polich ဂျေ Bing ငယ်ရွယ်လူကြီးများအတွက်သောက်သုံး: ဒေတာများ, အဓိပ္ပာယ်နှင့်ပြဌာန်းခွင့်။ Psychol Bull ။ 2009; 135: 142-156 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
9 ။ Derbyshire KL, Grant က je ။ compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ: စာပေ၏သုံးသပ်ချက်။ J ကိုပြုမူနေစွဲ။ 2015; 4: 37-43 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
10 ။ Dhuffar MK, Griffiths က MD ။ တစ်ဦးရှေ့ပြေးလေ့လာမှု: အရှက်ကွဲခြင်းနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကို hypersexual အပြုအမူတွေအတွက်၎င်း၏အကျိုးဆက်များ၏အခန်းကဏ္ဍကိုနားလည်ခြင်း။ J ကိုပြုမူနေစွဲ။ 2014; 3: 231-237 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
11 ။ Frisch ကို MB, ကော်နဲလ် J ကို, Villanueva M က, Retzlaff PJ ။ ဘဝစာရင်း၏အရည်အသွေးလက်တွေ့အတည်ပြု: ကုသမှုအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းနှင့်ရလဒ်ကိုအကဲဖြတ်အတွက်အသုံးပြုရန်ဘဝကိုကျေနပ်အားရမှု၏တစ်ဦးကတိုင်းတာ။ Psychol အကဲဖြတ်။ 1992; 4: 92-101 ။
12 ။ Gratz KL, စိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းများနှင့် dysregulation ၏ Roemer အီး Multidimensional အကဲဖြတ်: ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ, အချက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းစကေးအတွက်အခက်အခဲများ၏ကနဦးအတည်ပြု။ J ကို Psychopathol ပြုမူနေအကဲဖြတ်။ 2004; 26: 41-54 ။
13 ။ Grov ကို C, Golub လုပ် SA, Mustanski B, Parsons JT ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive, ပြည်နယ်အကျိုးသက်ရောက်စေနှင့်လိင်တူချစ်သူများနှင့်ရိုးရိုးယောက်ျားတစ်ဦးနေ့စဉ်ဒိုင်ယာရီလေ့လာမှုမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူ။ Psychol စွဲပြုမူနေ။ 2010; 24: 487-497 ။ [PubMed]
14 ။ Kaestle အီး, Halpern မှန် CT, Miller က WC, Ford ကား CA. ပထမဦးစွာလိင်ဆက်ဆံခြင်းမှာလူငယ်ခေတ်နှင့်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းနှင့်လူငယ်လူကြီးများအတွက်လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါပိုးမကူးစက်။ နံနက် J ကို Epidemiol ။ 2004; 161: 774-780 ။ [PubMed]
15 ။ Kann L ကို, Kinchen S က, Shanklin SL, Flint KH, Kawkins J ကို, Harris က WA, လောရီ R ကို, Olsen EO, McManus T က, Chyen: D, Whittle, L, et al ။ လူငယ်စွန့်စားမှုအပြုအမူစောင့်ကြည့်-အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု, 2013 ။ Morb Mortal Wkly ကိုယ်စားလှယ် Surveillance Summ ။ 2014; 63: 1-168 ။
16 ။ Kuzma JM, Black က DW ။ ကူးစက်ရောဂါ, ပျံ့နှံ့နှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကသဘာဝသမိုင်း။ စိတ်ရောဂါ Clin မြောက်မိပါတယ်။ 2008; 31: 603-611 ။ [PubMed]
17 ။ Lykins အေဒီ, Janssen အီး, ဂရေဟမ် CA. လိင်ကွဲကောလိပ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်အမျိုးသားများတွင်အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ဓါတ်များနှင့်လိင်အကြားဆက်ဆံရေး။ J ကိုလိင် Res ။ 2006; 43: 136-143 ။ [PubMed]
18 ။ Odlaug BL, Grant က je ။ တစ်ကောလိပ်နမူနာအတွက် Impulse-ထိန်းချုပ်မှုရောဂါ: အ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှုဖို့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမင်နီဆိုတာ Impulse Disorders အင်တာဗျူး (MIDI) မူလတန်းစောင့်ရှောက်မှုအဖော်အနေဖြင့်ရလဒ်များ။ 2010; 12: d1-e5 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
19 ။ Patton JH စတန်းဖို့ဒ်က MS, Barratt ES ။ အဆိုပါ Barratt Impulse စကေး၏ factor ဖွဲ့စည်းပုံမှာ။ J ကို Clin Psychol ။ 1995; 51: 768-774 ။ [PubMed]
20 ။ ရိဒ် RC, Temko J ကို, Moghaddam JF, Fong သည် TW ။ အရှက်ကွဲခြင်းကိုမွေးမြူရေးနှင့် hypersexual ရောဂါအတှကျအအကဲဖြတ်ယောက်ျားအတွက် Self-သနားစုံမက်။ J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု Pract ။ 2014; 20: 260-268 ။ [PubMed]
21 ။ ရိဒ် RC ။ ဘယ်လို Hypersexual Disorder ၏ DSM-5 အဆိုပြုထားခွဲခြားဘို့ဆုံးဖြတ်ရ severity သင့်သလဲ J ကိုပြုမူနေစွဲ။ 2015; 4: 221-225 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
22 ။ Rosenberg ကအမ်လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်ဆယ်ကျော်သက် Self-image ကို။ Princeton University ကစာနယ်ဇင်း; Princeton, NJ: 1965 ။
23 ။ Santelli JS, Brener ND, လောရီ R ကို, Bhatt တစ်ဦးက, Zabin LS ။ အမေရိကန်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းနှင့်လူငယ်လူကြီးများများထဲတွင်အကွိမျမြားစှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပေါင်းအဖေါ်များ။ Fam Plann ရှုထောင့်။ 1998; 30: 271-275 ။ [PubMed]
24 ။ Sheehan DV, Lecrubier Y ကို, Sheehan KH, Amorim P ကို, Janavas J ကို, Weiller အီး, Hergueta T က, Baker R ကို, Dunbar မှာ GC ။ Mini-အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါအင်တာဗျူး (MINI): DSM-IV နှင့် ICD-10 များအတွက်ဖွဲ့စည်းပုံမှာအဖြေရှာတဲ့စိတ်ရောဂါအင်တာဗျူး၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် validation ကို။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1998; 59: 22-33 ။ [PubMed]
25 ။ Young က SE, Corley RP, တင်းကုပ် MC, Rhee SH, Crowley တီဂျေ, ဝစ် JK ။ ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှု, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်အလွဲသုံးစားမှုနှင့်မှီခို: ပျံ့နှံ့, လက္ခဏာ profile များကိုများနှင့်ဆက်စပ်။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 2002; 68: 309-322 ။ [PubMed]
၂၆။ Bender R၊ Lange S. အတွက်မျိုးစုံစမ်းသပ်ခြင်းအတွက်ဘယ်အချိန်နှင့်ဘယ်အချိန်မှာညှိနှိုင်းနေသလဲ။ J ကို Clin Epidemiol ။ 26 Aprပြီ; 2001 (54): 4-343 ။ ပြန်လည်သုံးသပ်။ [PubMed]